Vari ebike iro Ramangwana reDockless yeruzhinji bhasikoro rendi? | ebike Shuangye
musha Blog nhau Vari ebike iro Ramangwana reDockless yeruzhinji bhasikoro rendi?
Zuva ： 2021-06-15 Zvikamu:nhau Views: 1,560 maonero
Kunyangwe zvave muAmerica neEurope kwenguva isingasviki gore, bhiza isina dhoko iri kupararira nekukurumidza pasirese.
Izvo zvakatanga muSeattle semuyedzo wakakweretwa kubva kuChina kubva zvapararira kumaguta kubva kuLos Angeles kuenda kuWashington, DC Uye nepo vakuru vehurumende vachiedza kugadzirisa zvimwe zvinhu zvitsva-mabhasikoro achiva marara nemarara muDallas, kune mumwe chete - vashandisi vari kuchaja kumberi pamwe neinotevera maitiro mune dockless shanduko: emagetsi mabhasikoro.
Jump, yeBrooklyn-based-start-up, yakava yekutanga kambani isina dock kuburitsa e-mabhasikoro paakatanga muDC munaGunyana. Mwedzi wapera zvakare yakahwina chibvumirano chekutanga chekutanga kushanda e-mabhasikoro muSan Francisco. LimeBike yakafumura yayo isina dock e-bhasikoro pagore rino Consumer Electronics Show muLas Vegas. Mamwe makambani, seSpin uye Motivate, akazivisa e-bhasikoro vatyairi panguva imwe chete. Kunyangwe Uber akapinda muchiitiko ichi, achizivisa kuti zvaizobvumidza vashandisi kuwana maJump emabhasikoro vachishandisa iyo yekugovana share app.
Rudzi rwehunyanzvi hutsva hunoita kuti aya e-bhasiketi ari kubuda agoneke. Kuvandudzwa kwemagetsi emagetsi, senge malaptop, kwaendesa mabhatiri eLithium-ion akavandudzwa ayo akareruka uye anobata muripo kwenguva yakareba. Kufambira mberi kweGPS nemasaini maseru zvinoita kuti zvive nyore kuteedzera boka remabhasikoro akatenderedza metro nharaunda. Uye nekuda kwekukura kwekudiwa muEurope neAsia, zvinhu zvakaita setorque sensors uye mota zvave kudhura uye kukwirira muhunhu.
"Izvo chaizvo zvikamu zviri pamabhasikoro edu izvozvi, izvo zvikamu zvaive zvisina kuwanikwa kunyangwe gore nehafu kana makore maviri apfuura," akadaro Ryan Rzepecki, Jump's CEO. "Mabhasikoro edu ane mamaira makumi mana paari, izvo zvinoita kuti zvatiri kuita zvibudirire zvikuru."
Mazhinji dockless bhasikoro-share masisitimu ane akafanana setup. Vatasvi vanorodha pasi purogiramu yefoni, iyo inovabvumira kuti vawane mabhasikoro anowanikwa munzvimbo yavo. Vanobva vasarudza bhasikoro, voisa nhamba yaro yeID, kana kutsvaira kodhi yeQR, vobva vasimuka, vachikiya zvakare kwese kwanyanya kuvanakira. Kuwedzera e-mabhasikoro kunoita kuti maitiro acho ave anodhura zvishoma kupfuura zvakajairwa: Kune ayo magetsi ngarava, LimeBike inobhadharisa $ 1 yekufambisa uyezve imwe dhora pamaminetsi gumi ega ega ekushandisa, ayo anosvika madhora mana kwehafu yehafu yeawa. Mabhasikoro ayo emagetsi anoshandiswa, achienzanisa, anobhadharisa chete $ 10 pamaminetsi makumi matatu ekukwira. Svetuka madhora $ 4 kwehafu yekutanga yeawa uye masendi manomwe paminiti yega yega yekuwedzera.
Kune mamwe matambudziko kune iyi modhi, hongu, kusanganisira maitiro ekuona kuti mabhasikoro aripo kunowanikwa nevanhu vanoada. Svetuka inovimba nezvikwata zvepasi kuyera system yayo. "Chinhu chikuru chezviitwa vakomana mumavheni ari kuunganidza mabhasikoro, kusevha mabhasikoro, uye kufambisa mabhasikoro pazvinenge zvichidikanwa," akadaro Rzepecki. GPS uye maseru maseru anotendera zvikwata kumera mabhasikoro asina kufamba uye kuzvidzosera kunzvimbo inozivikanwa.
Tags:Ruzhinji rwekuhaya bhasikoro
Prev: Kugamuchirwa kuShuangye 129th Online Canton Fair
Next: Bafang Mid Drive Kits ye DIY Magetsi Mabhasikoro